Kuleylka Koolajiyada Xariga Leashes-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha Eeyaha Koolalka Xargaha Warshad
Koolada eyda milicsiga ah ee milicsiga ah waxaa loogu talagalay qashin jilicsan iyo mesh jilicsan Koolarka qaaliga ahi waa khafiif wuxuuna caawiyaa yaraynta xanaaqa iyo xoqidda.
Koolada eyda milicsiga ah ee milicsiga ah ayaa sidoo kale loogu talagalay qalab milicsi leh. Waxay kaa caawineysaa inaad ku ilaaliso ilmahaaga amaan iyadoo kor u qaadeysa muuqaalkeeda inta lagu jiro socodka habeenka.
Koolada eyda dharka ka tarjumeysa ayaa leh siddooyin D oo tayo sare leh. Markaad la baxdo cunugaaga, kaliya ku xir xarigga giraanta biraha-birta ah ee waarta oo si tartiib tartiib ah u soco.